Xiddig hore ugu soo ciyaaray Barcelona oo si daran ula xanuunsanaya coronavirus - Hargeele - Wararka Somali State
(Turkey) 31 Mar 2020. Caabuqa dunida ku faafay ee coronavirus ayaa noqday mid saameeya qayb walba oo bulshada dunida ku nool ka mid ah, waxaana ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta ciyaara, macallimiinta iyo shaqsiyaad hore ugu lug lahaa dhaq-dhaqaaqyada ciyaaraha.
Goolhayahii hore ee Barcelona, Rustu Recber ayaa lagu soo warramayaa inuu si aad ah ula xanuunsanayo coronavirus isagoo ku jira Isbitaal Turkiga ku yaalla.
Isil Recber oo ah xaaskiisa ayaa ahayd shaqsigii ugu horreeyay ee uu soo wajaho caabuqa dunida gilgilaya kaddib markii ay kasoo laabatay safar ay kaga timid Mareykanka.
Warar kala duwan oo kazoo baxaya dalka Turkiga ayaa xaqiijinaya in laacibkii hore ee Barca iyo xaaskiisa ay la jiifaan coronavirus.
46-jirkan u dhashay dalka Turkey ayaa kooxda Camp Nou ka dhisan u saftay keliya toddobo kulan ka hor inta uusan ku laaban dalkiisa isagoo u ciyaaray kooxaha Fenerbahce iyo Besiktas.
Real Madrid oo xiddig muhiim ah ka dooneysa kooxda Paris Saint-Germain